विवाह मा पाहुनाहरूलाई कृतज्ञता शब्द। के र कसरी कुरा गर्न
विवाह नजिक र देशी मान्छे एक नयाँ परिवार को जन्म ध्यान दिनुहोस् साथ सँगै काम गर्न डिजाइन गरिएको छ। अतिथिहरूको दिन प्रस्तुत जवान, एक टोष्ट, विदाई इच्छा भन्दै प्रस्तावित नयाँ जीवन दिन। त्यसैले यसलाई सबैतिर र सबैका लागि स्वीकृत भएको छ। राम्रो कुनै पनि व्यक्ति यस्तो घटना हुनु, र यो निमन्त्रणा सम्मान रूपमा कथित छ।
तर त्यहाँ एउटा परम्परा छ, र तिनीहरूले विवाह शोभा बढाएका के लागि अतिथि धन्यवाद। दुलही र दुलहा, कृतज्ञता शब्दहरू बोले - को पाठ्यक्रम, दिन को नायक, यो के। किनभने यो व्यक्तिगत प्रत्येक भेट्नुपर्छ गर्न सम्भव थिएन जवान मा एक भोज समयमा विवाह मा अतिथिहरूको यो विशेष गरी राम्रो सुन्न। ती सबै वर्तमान आफ्नो कृतज्ञता व्यक्त एक भाषण मा, साँझ सामान्यतया लेट धन्यवाद। यसरी, जवान परिवारले आफ्नो अतिथि को उत्सव उपस्थित सबैलाई ध्यान दिन्छिन्।
विवाह मा पाहुनाहरूलाई कृतज्ञता शब्द। के रूप मा उनि सुनाइन्छ
उल्लेख रूपमा यो सामान्यतया पर्दा अन्तर्गत धन्यवाद भोज उच्चारण छ, तर जब अतिथि अझै dispersed थिएनन्। त्यो जवान छ, वा अग्रिम toastmaster कविता वा गद्य को रूप मा embodied। त्यहाँ तयार बनाएको भाषण, ODES, र सारा कविता छन्। तर, सधैं विवाह को पाहुनाहरूलाई धन्यवाद को शब्द दुलही र दुलहा आफूलाई साथ आउन जब छोएर। यी रेखाहरू उपस्थित सबैलाई निष्कपटता, निष्कपटता र साँचो मूल्यांकन संग imbued गरिनेछ। यो वाणी संग, युवाहरूलाई तिनीहरूका पाहुनाहरूलाई, व्यक्त गर्न पुग्न सक्छ सबैलाई गर्न आफ्नो ध्यान आदर। सारा साँझ दुलही र दुलहा छुट्टी को केन्द्र छन्, तर तिनीहरूलाई बिना यो घटना यस्तो मजा भएको छैन किनभने छन् यो क्षण मा, मुख्य अतिथि छन्!
म धन्यवाद भन्न जहाँ अरू आश्चर्य आफ्नो विवाहको दिन?
अतिथि मात्र पूर्व सोभियत संघ को देशहरुमा छैन स्वीकार धन्यवाद। यो परम्परा युरोप, क्यानाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका मा व्यापक छ। मीठो व्यञ्जन, उपहार आइटम, सुन्दर कार्ड: त्यहाँ mementos को प्रस्तुति प्रतिस्थापन विवाह पाहुनाहरूलाई धन्यवाद को शब्द कहिलेकाहीं छ। तिनीहरूले सामान्यतया पूर्व देर साँझ मा उत्सव वा सौंपन गर्न उपकरणको व्यक्तिगत अतिथि वरिपरि फैलाउन छन्। विशेष गरी लोकप्रिय क्यान्डी बक्स, तिनीहरूले मिठाई, पक्ष, स्मृति चिन्ह को एक किसिम राखे। यसरी, जोडी आफ्नो पाहुनाहरूलाई आदर र कृतज्ञता व्यक्त। त्यहाँ अर्को परम्परा छ। दुलही र दुलहा तिनीहरूलाई पोस्टकार्ड वा व्यापार केन्द्र संग एक तस्वीर र आफ्नो यात्रा एक संक्षिप्त विवरण पठाउने, आफ्नो सुहागरात आफ्नो फिर्ती को उत्सव सहभागी धन्यवाद। विवाहको लागि आफ्नो यात्रा को लागि धन्यवाद सन्देश सुदृढ।
तिनीहरूले स्वीकृति बोलीमा के भन्न
दुलही र दुलहा तिनीहरूलाई को एक utters एक संयुक्त भाषण तयार हुन सक्छ। जवान तिनीहरूले पालैपालो लिए भन्न भने - तर तपाईं दुई कल गर्न सक्छन्। आफ्नो शब्दमा, जोडी तिनीहरूले उपहार को समर्थन र आफ्नो हँसिलो स्थितिका लागि, आउन समय यो आनन्दित क्षण तिनीहरूलाई साझेदारी के को लागि सबै सहभागीहरू धन्यवाद छ।
अक्सर महिला दुलही को पाहुनाहरूलाई कृतज्ञता शब्दहरू के हुनुपर्छ सोध्नुहोस्। यो पनि विशेष मेरा साथीहरू र पूर्व-विवाह bustle उनको मदत गर्ने ती धन्यवाद दिन चाहन्छु, ती सबै वर्तमान को पहिचान व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ। एक छुट्टी मा marriageable उमेर बालिका छन् भने, त्यो जीवनमा बलियो प्रारम्भिक हासिल चयन हुन सक्छ। अलग बोली व्यक्त आमाबाबुले गर्न कृतज्ञता पतिको भइन् राम्रो मानिसको जन्म र पालनपोषण लागि पतिको।
सदिश विवाह र यसको मुख्य विशेषताहरु। संघ को यस प्रकारको सम्बन्ध।
रोचक विचार: लामो कपाल लागि विवाह Hairstyles एक घुम्टोमा
यो केटी भने के: विवाह मा साक्षी?
विवाह असाधारण बधाई
परिवार र समाजमा महिला को भूमिका
सार्वजनिक शक्ति कल्याण राज्य दर्पण
"डिकंका नजिकैको फार्ममा" पनि: संग्रहको एक सारांश
वजन लागि जई
फलाम र यसको लाभ को घनत्व
मनोरंजन - यो ... रूसी मनोरंजन मा ज्ञात
वसन्त को लिपि - विशेष गरी रोचक विचार र सिफारिसहरू
एक जोर दुर्घटना जहाज। सत्य र कल्पना बीच लाइन कहाँ छ?
TRK "ग्यालेक्सी", ऐना Maze, चिडियाघर "सफारी पार्क", oceanarium: कहाँ क्रास्नोडार मा बच्चाहरु संग जान
ग्रीक दही। लागि नुस्खा
मोडुलर origami: कागज फूलहरु को लागि एक फूल।
आइटीसी खाता - छोडपत्र? किन लगानी छैन, समीक्षा